1-4mL Autosampler fijaan Waayo HPLC, UPLC, GC
16mm, 25 mm Tube Test Waayo Falanqaynta Water kalluun, FTU
6-20mL GC HEADSPACE fijaan
8-60mL EPA Kaydinta fijaan
HPLC siriinjyada Filter
Xirxirida iyo Delivery
waxaa la aasaasay sanadkii 2007
Zhejiang Aijiren Technology, Inc waa alaab-caalami ah oo nolosha-sayniska, chemistry, isticmaalo shaybaarka, iwm waxyaabaha Our waaweyn yihiin waxqabadka sare chromatography dareere & chromatography gaaska isticmaalo sida Chromatography Autosampler fijaan oo la xiritaanka, qobays, crimper iyo silingaha filtarrada, iwm; isticmaalo falanqaynta Water sida tube imtixaan kalluun.
Zhejiang Aijiren Technology, Inc. ayaa lagu qeybinayay in ka badan 70 dal, daboolaa ka badan 2000 oo macaamiisha adduunka oo dhan. 120 shaqaalaha, 100,000 oo qolka nadiifinta fasalka, ISO, GMP & Bureau Veritas shahaado, tani waa sida aan u sii tayo sare iyo qiimaha tartan rasmi ah oo loogu talagalay macaamiisha caalamka qiimeeyo.
dhaqanka ganacsiga ee The "Tayada ugu horeysay, iyo siin oo kaamil ah." kor Aijiren The si joogto ah u guuraan, iyo waxa ay sidoo kale taageero Aijiren The in ay iskaashi iyo innovation.It waa ballan ganacsi ay ballankaas si ay u bixiyaan waxyaabaha tayo sare leh iyo adeegga wanaagsan macaamiishayada. "Si joogto ah horumarinta waxyaabaha cusub si ay u qanciso baahiyaha isticmaalayaasha" waa yoolkeeda kama dambaysta ahi. Shirkadda Our waa diyaar si ay u sahamiyaan suuqa ugu badan ee Shiinaha iyo dalal shisheeye, lana dooni horumarinta caadiga ah oo duurka ku cusub shaqada. 70 boqolkiiba wax soo saarka waa la iibiyey Yurub iyo suuqa goomahooda United States. Iyada oo in ka badan toban sano horumarka iyo dadaalka, isdhaafsiga iyo iskaashi la waaxaha badan technology cilmiyaysan ee gudaha iyo dibaddaba, aan si guul leh horumariyo noocyada kala duwan ee fijaan autosampler si gaar ah loo isticmaalo in industry shaybaarka iyo falanqaynta. Waxaan ku siin karnaa shaybaarka isticmaalo waxyaabaha dawaarle-sameeyey oo tayo sare leh si ay macaamiisha adduunka oo dhan, kuwaas oo kaa caawin kara inaad ka adkaan caqabadaha ka hor marka tijaabo shaybaarka.
waa la aaminsan yahay iyo shaqada ee Aijiren, oo waxay saldhig u ah our horumarinta.
Ku soo dhowow si ay u booqdaan iyo iskaashi!
NO.3 Qusheng Rd, Nianli Town, Quzhou, Zhejiang, Shiinaha